I-Pontaillac, i-Royan eyi-100m yolwandle ehamba eningizimu kuvulandi
Vaux-sur-Mer, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Frederique
Ifulethi elihle i-T2 60M2 ukubukwa kolwandle, lilungiswe ngokuphelele, likhanya kakhulu, amamitha ayi-100 ukusuka ebhishi laseRoyan "Pontaillac", izitolo nezindlela zomjikelezo wamabhasi. Indawo yokupaka yamahhala yangasese, igumbi lebhayisikili. Indawo yokuhlala esezingeni, ebheke eningizimu, ithala elingu-13m2 (elinokubukwa kolwandle). Uzokwazisa ukuzola, ukusondela kwendlela yasogwini kanye nezindawo ezikhangayo ezahlukahlukene eziseduze (ikhasino, ithalassotherapy, ithenisi, igalofu, izu yasePalmyre, njll.)
Indawo yokungena enamakhabethe, ikhabethe laseChina,
Ithoyilethi elizimele elinesitsha sokugeza;
Ikhishi elivuselelwe ngokuphelele futhi elihlome ngokuphelele (umshini wokuwasha izitsha, ihob yokungeniswa kanye nesikhipha, isiqandisi sefriji, imicrowave, iketela, amarobhothi asekhishini, umshini weNespresso, njll.)
Umbhede ophindwe kabili ongu-160 (omusha) onekhabethe nesifuba samadrowa,
Igumbi lokugezela elilungiswe ngokuphelele, elineshawa yase-Italy, umshini wokuwasha
Igumbi lokuhlala elikhulu, elikhanyayo kakhulu elingu-26m2, elinosofa, usofa omusha wesibili omusha we-Rapido wohlobo lwe-120, itafula elakhiwe isiNtaliyane, ithelevishini, ideski elincane.
Ukuze uthole ulwazi, leli fulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-4, abantu abadala abangu-2 nezingane ezimbili, noma abantu abadala abangu-3. Ngincamela ukuveza ukuthi okuguquguqukayo kungu-120 futhi kungaba okwabantu abadala ababili kuphela.
Amamitha ambalwa ukusuka ebhishi laseRoyan Pontaillac, leli fulethi lisendaweni ekahle. Indawo yokupaka yamahhala yangasese iyatholakala. Isifunda sasePontaillac sithandwa kakhulu futhi siyaphila, sinezindawo zokudlela eziningi nezitolo ezivulwa unyaka wonke. Ikhasino kanye nerestaurant yayo ogwini. Ibhishi elincane kodwa elivikelwe emoyeni. Indlela yasogwini emnandi kakhulu, nendlela yamabhayisikili. Ezokuthutha zomphakathi . Ukuzijabulisa kulo lonke ihlobo, iklabhu yezingane kanye nesikole sokuntweza emanzini. Ifulethi lihlehlisiwe futhi lithule ngokwanele, kodwa ukuhamba ngezinyawo imizuzu emibili ungaya olwandle, uyothenga, uphume uyodla, uphuze ngisho nokudansa (ikhonsathi evamile egaraji nehholo le-xobam lekhasino) .
Ukuze uthole ulwazi, ikheli eliqondile lise-Vaux sur Mer, kodwa indawo yokuhlala iseduze nesifunda sase-Royan Pontaillac kunenkaba ye-Vaux sur Mer (ungayithola kumephu)
Ngiqasha leli fulethi, engihlala kulo ngezikhathi ezithile, ngakho ngishiya izinto zami siqu lapho, kodwa ngizokushiyela yonke indawo edingekayo emakamelweni ezinto zakho. Ngakolunye uhlangothi, ifulethi linethezekile ngokwedlulele futhi lifakwe kahle kakhulu. Amashidi anikeziwe. Ngiphinde ngikunikeze amathawula (kodwa awekho ithawula lolwandle), amathawula asekhishini nayo yonke imikhiqizo edingekayo empilweni yansuku zonke izoba onawo ngesikhathi uhlala.
Ngiqasha leli fulethi, engihlala kulo ngezikhathi ezithile, ngakho ngishiya izinto zami siqu lapho, kodwa ngizokushiyela yonke indawo edingekayo emakamelweni ezinto zakho. Ngakolun…
Inombolo yepholisi: G17857897575
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R17994.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vaux-sur-Mer namaphethelo